Waa mid ka mid ah arrimaha ugu badan in user a wajahaya marka aad isticmaalayso iPhone iyo dadka isticmaala badan waxaa aad u niyad-jab. Mar kasta oo ay arrinta la soo gudboonaado user ayaa wajahaya Baadi soo socda:
Waxaa jira tobanaan kun oo forums halkaas oo dadka isticmaala ayaa xaqiijiyey in su'aashan aan la weydiiyay oo keliya, laakiin sidoo kale ugu jawaabay. Waxaa dhab ahaantii si toos ah oo la xidhiidha arrinta meel lagu kaydin jiray oo iPhone ay sabab u tahay xaqiiqada ah in macruufka waa mid aad u caqli iyo waxgarasho leh software oo waa inuusan marna siinayaa qalad kasta oo aysan jirin waa cayayaanka ah kaas oo had iyo jeer ay soo sheegeen Apple Inc. ah in dadka isticmaala iyo waxay sidoo kale u sheeg in ay ku jiraan waa in la hubiyo in xal la siiyaa. Ilaa hadda Apple ayaa marnaba soo saaray bayaan ku saabsan qaladka sakhiray si ugu badan tahay in ay tahay dhibaato dhamaadka user iyo waxay leeyihiin si ay u sahamiyaan oo dheeraad ah ay iDevice si loo hubiyo in xaalada ayaa ah mid aan marnaba mar kale soo wajahay waxaana loo xalin sida ugu dhaqsaha badan.
Habka 1: Hubi dhabta ah meel
Habka 2: Update Lugood iyo macruufka versions
Habka 3: Eeg goobaha ammaanka
Habka 4: Soo Celinta iPhone la Lugood Alternative
Habka 1: Hubi meel dhabta ah
Waxaa sidoo kale waa hab aad caadi u ah in la hubiyo in meel bannaan oo ku iPhone la baaro si loo hubiyo in qalad oo la gooyo iyo habka dheeraad ah horumarka. Si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in meel bannaan oo ku saabsan qalab la hubiyaa si aad u hesho dhibaatada la xalin sida ugu dhaqsaha badan. Tag Settings> General> Isticmaalka si loo arko inta la heli karo meel aad iDevice.
Haddii boos kuma filna, aad gacanta tirtiri kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda la rabin ama sawiro ku saabsan iphone. Yo sidoo kale raaci kartaa hagaha halkan si aad u cadeeyo meel aad iPhone ama ipad . Haddii ay jirto meel ku filan oo ku saabsan iDevice, fadlan akhri on oo raac habka hoose si aad u hagaajin khalad.
Habka 2: versions Update Lugood iyo macruufka
Waa arrin aad u muhiim ah in la ogaado in haddii nooca ugu dambeeya ee Lugood iyo macruufka aan lagu rakibay xitaa markaas user ku wajihi karaan arintan. Si loo xaliyo dhibaatada waxaa lagula talinayaa in ay raacaan tilmaamaha hoos ku qoran:
Ka dib markii deeruhu galay il awoodeed oo ah user uu leeyahay si ay u helaan Settings waddada> General> update Software ah. User ayaa markaas u baahan yahay inuu ka jaftaa "Download iyo rakib"
In uu suuqa kala socda user mar kale u baahan yahay inuu ka jaftaa "rakib" si loo hubiyo in nidaamka la soo gabagabeeyey:
Fariin qalad Tani waxay sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay keento Lugood. Sidaas hubi in aad cusboonaysiiso Lugood u leedahay in aad isku daydo. Orod Lugood> Riix Hubi Update> Raac prompts si loo soo dajiyo nooca ugu dambeeya ee Lugood. Dhanka kale, waxa kale oo aad uninstall karaa Lugood gabi ahaanba ka your computer iyo soo bixi version ugu danbeeyay ee website-ka rasmiga Apple .
Habka 3: Eeg goobaha software ammaanka
Mararka barnaamijyadooda ammaanka dagaalada lagu rakibay la Lugood si aad u hesho qaladka sakhiray oo waa u fududahay in ay xaliyaan sidii user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in geedi socodka soo socda waxaa la socda si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican:
Taariikhda, wakhtiga iyo zone markii goobaha ay tahay in la cusbooneysiiyaa haddii aanay sax ah.
Version Latest ee Lugood waa in lagu dhejiyaa ka badan computer
The daaqadaha ama Mac OS waa in si joogto updated
Daawadan ammaanka danbeeyay ee software saddexaad xisbiga ammaanka waa in lagu dhejiyaa.
Files ciidanka on Mac iyo daaqadaha waa in la hubiyaa si loo hubiyo in aanay sabab u yihiin arrinta.
Haddii dhan loo dawayn lahaa kor ku xusan markaa ku fashilanto waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in software ammaanka laga naafada ah inta lagu guda jiro habka hagaajinta si loo xaliyo arrinta.
Habka 4. Soo Celinta iPhone la Lugood Alternative
Sida caadiga ah hababka kor ku caawin kara inaad hagaajin fariin qalad ah "Space gelin ku filan aan iPhone soo celinta ee kaabta" marka aad isku daydo in ay soo celiso gurmad ah Lugood in aad iDevice. Haddii nasiib daro ma aha, halkan waxaan ku talinaynaa in aad qalab kale oo Macdan gurmad ah Lugood iyo soo celin si kasta oo aad idevcies- Wondershare Mobiletrans .
Talaabada 1: Dooro gurmad Lugood.
Fur Mobiletrans Wondershare on your computer, guji Soo Celinta ka hayaan ee suuqa kala hoose dooro Lugood ka fursadaha gurmad ah. Barnaamijku wuxuu delect oo dhan Lugood hayaan on your computer si toos ah.
Talaabada 2: Isku qalab macruufka.
Connect qalab macruufka in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Sida caadiga ah Mobiletrans u aqoonsadaan doonaa sida telefoonka bartilmaameedka.
Talaabada 3: Dooro files iyo bilowdo wareejinta.
Dooro files ka gurmad Lugood aad jeclaan lahayd in ay u gudbiyaan. Riix Start Transfer ee barnaamijka, waxa ay kaa caawin doontaa in aad wareejin dhammaan faylasha aad dooratay in phone bartilmaameedka daqiiqado yar gudahood.
> Resource > iPhone > Quick Fix 'Space gelin ku filan aan iPhone soo celinta ee kaabta'